Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tsy misy drafitra vonjy maika: ATCEUC dia namoaka snapshot momba ny fitantanana ny fifamoivoizana an'habakabaka any Eropa
Aza atsipy amin'ny rano fandroana ilay zaza! ”
Niteny ny filoha Volker Dick, mpandrindra ny fifamoivoizana an'habakabaka
Tamin'ny 23 martsa 2021, EUROCONTROL dia namoaka Data Snapshot miaraka amin'ny fanadihadiana ny fivoaran'ny vidin'ny ATM any Eropa hatramin'ny taona 1998. Ny fampiasana ireo data ireo dia manome ny heviny momba ny fanadihadiana EUROCONTROL.
Hatramin'ny lohataona 2020, ny valan'aretina COVID-19 dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina iray manontolo izay naneho fa tsy nisy ny mpandray anjara no nahita ireo tranga ireo ary tsy nanana drafitra maika hamahana krizy rafitra toa izao.
Noho izany, tamin'ny valinteny tara sy tsy niombana, tamin'ny Novambra (valo volana taorian'ny nialan'ny areti-mandringana sy ny fidinan'ny fifamoivoizana an-habakabaka) dia namoaka ny lalàna IR 2020/1627 ny Vaomiera Eoropeana izay mikendry ny hanamaivanana ny fiantraikan'ny areti-mifindra, fa amin'ireo mpampiasa habakabaka ihany.
Amin'izao fotoana izao ny EC dia manery ny fanjakana hampihatra ny tolo-kevitra ad-hoc navoakan'ny PRB, fa ny tarehimarika naroson'izy ireo, indrindra ireo momba ny fahombiazan'ny vidiny, dia tsy neken'ny fanjakana mpikambana sy ny tanjon'ny Union izay nohavaozina. ny tambajotra ATM amin'ny vanim-potoana fanovozana fahatelo (2020-2024) dia ampakarina ankehitriny.
Na dia henjana aza ny fidinan'ny fifamoivoizana ary nifanaraka tamin'ny fitsipika ny ATCEUC fa tsy tokony havela hizaka ny vokany ireo mpampiasa ny habakabaka (ary tsy…), io krizy io dia tsy tokony hatao fialamboly hametraka fepetra ara-bola tsy voamarina amin'ny ANSP amin'ny fotoana tena ilana azy ireo rehefa mila mampiasa vola amin'ny teknolojia vaovao izy ireo mba ho vonona amin'ny fanarenana.